परमेश्‍वरको वचन | "अन्धकारको प्रभावदेखि उम्की, र तँ परमेश्‍वरद्वारा प्राप्त गरिन सक्नेछस्" | अंश ५३५ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
परमेश्‍वरको वचन | “अन्धकारको प्रभावदेखि उम्की, र तँ परमेश्‍वरद्वारा प्राप्त गरिन सक्नेछस्” | अंश ५३५
अन्धकारदेखि उम्किन तँ परमेश्‍वरप्रति पहिले वफादार हुनैपर्छ र सत्यतालाई अनुसरण गर्न हृदयदेखि नै इच्छुक हुनुपर्छ; तब मात्रै तैँले सही अवस्था प्राप्त गर्न सक्छस्। सही अवस्थामा जिउनु अन्धकारको प्रभावदेखि उम्किनको निम्ति पूर्वआवश्यकता हो। सही अवस्थामा नहुनु परमेश्‍वरप्रति वफादार नहुनु हो, र सत्यता खोजी गर्न हृदयदेखि नै इच्छुक नहुनु हो; अनि तँ अन्धकारको प्रभावदेखि उम्कनु सवाल बाहिरको कुरा हुन्छ। अँध्यारो प्रभावहरू देखि मानिस उम्किनको लागि मेरा वचनहरू आधार हुन्, अनि मेरा वचनहरू अनुसार अभ्यास गर्न नसक्ने मानिसहरू अन्धकारको प्रभावको बन्धनदेखि उम्कन सक्ने छैनन्। सही अवस्थामा जिउनु भनेको परमेश्‍वरका वचनहरूको अगुवाइमुनि जिउनु, परमेश्‍वरप्रति वफादारिताको अवस्थामा जिउनु, सत्यताको खोजी गर्ने अवस्थामा जिउनु, परमेश्‍वरको खातिर इमान्दारितापूर्वक आफैलाई समर्पित गर्ने वास्तविकतामा जिउनु र परमेश्‍वरलाई साँचो रीतिले प्रेम गर्ने अवस्थामा जिउनु हो। जो यस्तो अवस्थाहरूमा र यस वास्तविकतामा जिउँछन्, तिनीहरू सत्यताको गहिराइभित्र प्रवेश गरिदै गर्दा विस्तारै रुपान्तरण हुनेछन्, अनि काम गहिरो हुँदै जाँदा तिनीहरू रुपान्तरण हुनेछन्; अनि अन्त्यमा तिनीहरू निश्चय नै त्यस्ता मानिसहरू हुनेछन् जो परमेश्‍वरद्वारा हासिल गरिएका हुन्छन् जसले उहाँलाई साँचो प्रकारले प्रेम गर्छन्। तिनीहरू जो अन्धकारको प्रभावदेखि उम्केका छन्, तिनीहरूले विस्तारै परमेश्‍वरको इच्छालाई सुनिश्चित गर्न सक्छन् विस्तारै त्यसलाई बुझ्न थाल्छन्, अन्ततः तिनीहरू परमेश्‍वरका विश्‍वासपात्रहरू हुन्छन्। तिनीहरूले परमेश्‍वरको बारेमा कुनै धारणा मनमा नराख्ने र उहाँको विरुद्धमा कुनै विद्रोह नगर्ने मात्र होइन, तर तिनीहरूले अगि तिनीहरूलाई प्रभुत्व गरेको त्यस्ता धारणा तथा विद्रोहहरूलाई झन् बढी घृणा पनि गर्छन्, अनि परमेश्‍वरको निम्ति साँचो प्रेम तिनीहरूको हृदयमा उदय हुन्छ। मानिसहरू जो अन्धकारको प्रभावदेखि उम्कन असक्षम हुन्छन्, तिनीहरू सबै देहद्वारा पूर्णरूपमा भरिएका हुन्छन् विद्रोहले भरिपूर्ण हुन्छन्; तिनीहरूका हृदयहरू जीविकाको निम्ति मानव धारणा तथा दर्शनशास्त्रहरू, साथै तिनीहरूका आफ्नै अभिप्राय तथा सोचविचारहरूले भरिएका हुन्छन्। परमेश्‍वरले चाहनुभएको कुरा मानिसबाटको अद्वितीय प्रेम हो; उहाँले चाहना गर्नुभएको कुरा मानिस उहाँका वचनहरूद्वारा र उहाँप्रतिको प्रेमले पूर्ण भएको हृदयद्वारा भरपूर भएको होस् भन्ने नै हो। परमेश्‍वरका वचनहरूमा जिउन, तिनीहरूले खोजतलास गर्नुपर्ने उहाँका वचनहरूमा खोज्न, उहाँका वचनहरूका निम्ति परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्न, उहाँका वचनहरूका निम्ति दौडन, उहाँका वचनहरूका निम्ति जिउन—मानिसले हासिल गर्न प्रयास गर्नुपर्ने लक्ष्यहरू यिनै हुन्। हरेक कुराप रमेश्‍वरका वचनहरूमाथि निर्माण हुनुपर्छ; तब मात्रै मानिसले परमेश्‍वरका मागहरूलाई पूरा गर्न सक्नेछ। यदि मानिस परमेश्‍वरका वचनहरूले सुसज्जित छैन भने, ऊ केही होइन, केवल शैतानको कब्जामा परेको भुसुना हो! यसलाई तौल्: परमेश्‍वरको वचनले कतिसम्म तँ भित्र जरा गाडेको छ? कुन कुराहरूमा तँ उहाँको वचनहरू अनुसार जिइरहेको छस्? कुन कुराहरूमा तँ उहाँको वचनहरू अनुसार जिइरहेको छैनस्? यदि परमेश्‍वरका वचनहरूले तँलाई पूर्णरूपले पक्रेको छैन भने, कुन कुराले यथार्थमा तेरो हृदयलाई ओगटेको छ? तेरो दिनदिनको जीवनमा, तँ शैतानद्वारा नियन्त्रित भइरहेको छ कि परमेश्‍वरको वचनहरूद्वारा ओगटिएको छस्? के उहाँको वचनहरूको जगमाथि तेरा प्रार्थनाहरू आधारित भएका छन्? के परमेश्‍वरका वचनहरूद्वारा अन्तर्दृष्टि पाएर तँ आफ्नो नकारात्मक अवस्थादेखि बाहिर आएको छस्? परमेश्‍वरको वचनहरूलाई तेरो अस्तित्वको जगको रुपमा लिनु—यही नै हरेक जना प्रवेश गर्नुपर्ने कुराहो। यदि उहाँका वचनहरू तेरो जीवनमा उपस्थित छैन भने, तँ अन्धकारको प्रभावमुनि जिइरहेको छस्, तैँले परमेश्‍वरको विरुद्धमा विद्रोह गरिरहेको छस्, तैँले उहाँको प्रतिरोध गरिरहेको छस् तैँले उहाँको नाउँलाई अनादर गरिरहेको छस्। परमेश्‍वरप्रतिको त्यस्ता मानिसहरूको विश्‍वास पूर्ण रूपमा हानि र खल्बली मात्रै हो। तेरो जीवनको कति भाग उहाँको वचनहरूअनुसार जिइएकोछ? तेरो जीवनको कति भाग उहाँको वचनहरूअनुसार जिइएको छैन? परमेश्‍वरको वचनले तँबाट माग गरेको कति जति तँमा पूरा भएको छ? कति जति तँमा हराएको छ? के तैँले त्यस्ता कुराहरूलाई नजिकबाट नियालेको छस्?
अन्धकारको प्रभावदेखि उम्किनुको निम्ति पवित्र आत्माको काम र मानिसको समर्पित सहकार्य दुवै आवश्यक हुन्छ। मानिस ठीक मार्गमा छैन भनी म किन भन्छु? ठीक मार्गमा भएका मानिसहरूले पहिले आफ्नो हृदय परमेश्‍वरलाई दिनसक्छन्। यो एउटा कार्य हो जसभित्र प्रवेश गर्न निकै लामो समय लाग्छ, किनकि मानवजाति सधैँ अन्धकारको प्रभावमुनि बाँचेको छ र हजारौँ वर्षदेखि शैतानको बन्धनमुनि रहेको छ। त्यसैकारण, यसभित्रको प्रवेश एक वा दुई दिनमा हासिल गर्न सकिँदैन। मानिसहरूले तिनीहरूका आफ्नै अवस्थालाई बुझ्न सकून् भनेर मैले यो विषय उठाएँ; जब मानिसले अन्धकारको प्रभाव के हो र ज्योतिमा जिउनु के हो भनी बुझ्दछ, तब प्रवेश गर्ने कुरा धेरै सजिलो हुन्छ। यो किनभने शैतानको प्रभावदेखि उम्किनुअघि यो के हो भनी तैँले जान्नुपर्छ; त्यसपछि मात्रै त्यसलाई फ्याँक्न तँसित उपाय हुनेछ। त्यसपछि के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा, त्यो चाहिँ मानिसहरूको आफ्नै काम हो। हरेक कुराभित्र सकारात्मक पक्षबाट प्रवेश गर् र कहिल्यै निष्क्रिय भएर नपर्खि। केवल यस तरिकाबाट मात्रै तँ परमेश्‍वरबाट हासिल गरिन सक्नेछस्।